कस्तो भ्याकुम क्लिनर प्रयोग गर्ने ?
काठमाडौ : बाजे बराजुको पालामा जस्तो कुचोले मात्र कोठा सफा गर्ने जमाना गए अब । घरको कोठामा विछ्याएको उच्च गुणस्तरको कार्पेटमा झाडु वा कुचो लगाउने कुरा पनि भएन । त्यसैले तपाईले भ्याकुम क्लिनर प्रयोग गर्न थाल्नुभएको छ ।
तर कार्पेटमा पोखिएका विभिन्न वस्तुहरु भ्याकुम क्लिनरले सफा गर्दा पनि तानिदैन भने विचार गर्नुहोस् कि तपाईको भ्याकुम क्लिनर त्यत्ति उत्कृष्ट छैन । बजारमा धेरै गुणस्तर र ब्राण्डका भ्याकुम क्लिनरहरु पाइन्छ । झोला झैं बोक्न मिल्ने, आवाज नआउने र व्याट्रिबाट समेत चल्ने भ्याकुम क्लिनरहरु आएका छन् ।
१ आवाज नआउने भ्याकुम क्लिनर
भ्याकुम क्लिनर अन गर्ने वित्तिकै ठूलो आवाज आउँछ । यसले घरभित्र मात्र नभई बाहिर सम्म पनि आवाज निकाल्ने भएकाले यसको विकल्पमा आवाज नआउने भ्याकुम क्लिनर बजारमा ल्याएको हो । आवाज नआउने भ्याकुम क्लिनर अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ ।
यदि तपाईको घरमा वा कोठामा पनि वल्लो वा पल्लो घर वा कोठाका मानिसहरुले भ्याकुमको आवाज मन पराउँदैनन् भने तपाईका लागि पनि उत्तम हुन सक्छ । यो अरु भ्याकुम क्लिनर भन्दा झण्डै दोब्बर मूल्य पर्छ ।
२. झोला जस्तो भ्याकुम क्लिनर
यो भ्याकुम क्लिनरको प्रयोगबाट गुडाइरहनुपर्ने र उचालिरहनुपर्ने झण्झटबाट मुक्ति मिल्छ । यो स्कुल ब्याग जस्तै भएकाले पछाडि पट्टि बोक्न मिल्छ । खासै गह्रुंगो पनि नहुने भएकाले यो झोला भिरेर घण्टौं सम्म कोठा सफा गर्न सकिन्छ ।
३. व्याट्रिबाट चल्ने भ्याकुम क्लिनर
हरेक कोठामा विजुलीको लाइन हुन्छ नै भन्न सकिन्न त्यस्तो बेला वा लोडसेडिङको समयमा पनि कोठा सफा गर्नका लागि यो भ्याकुम क्लिनर प्रयोगमा आउँछ । यी बाहेक बजारमा यसको विशेषता र क्षमता हेरी सस्तो देखि महँगा महँगा भ्याकुम क्लिनर पनि आएका छन् ।
त्यसको विशेषता, टिकाउपना हेरेर किनेमा तपाईको कोठालाई चाहेजस्तै सफा र सुन्दर बनाई राख्न सकिन्छ ।
नास्टद्वारा नेशनल वेब पोर्टल सार्वजनिक
उद्योगी चन्द्र प्रसाद ढकाललाई कोरोना संक्रमण
हुम्लामा सर्वपक्षीय बैठकः नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा विज्ञ टोली पठाउन आग्रह
सरकारको उच्च प्राथमितामा प्राविधिक शिक्षाः मन्त्री नेम्वाङ
रहेनन् निर्देशक शेर्मा
‘बस त चले, तर यात्रु चढेनन्’
मकवानपुरमा खोलाले बगाउँदा एक दम्पतीको मृत्यु
रारा जाने छोटो बाटो निर्माण, पर्यटकलाई सहज
कात्तिक लागेपछि मात्र दशैंको अग्रिम टिकट खुलाउने
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन छिट्टै गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश, को को हट्लान् ?
ललितपुरका तीनै जना मेयरमा कोरोना
पाल्पामा पहिरोमा बेपत्ता पाँचै जनाको शव भेटियो
युक्रेनमा सैन्य विमान दुर्घटना : २२ को मृत्यु, दुईको जीवितै उद्दार
मौसम पूर्वानुमान : तीन प्रदेशमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना
बली चढाउनको लागि भारतमा बेचिन लागेकी किशोरीको उद्धार